Madaxweyne Farmaajo oo bogaadiyey Bandhigga Buugaagta Cadaado - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Madaxweyne Farmaajo oo bogaadiyey Bandhigga Buugaagta Cadaado
Madaxweyne Farmaajo oo bogaadiyey Bandhigga Buugaagta Cadaado
September 5, 2018 admin3871 Comment on Madaxweyne Farmaajo oo bogaadiyey Bandhigga Buugaagta Cadaado
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyey Bandhigga Buugaagta Cadaado, Madaxweyanaha ayaa ayaa ammaanay intii soo abaabushay Bandhigay, Cadaado ayaa noqonaysa Magaaladii 5aad ee Bandhig nuucaan ah qabata.
Bandhigan oo socday shalay iyo maanta ayaa galabta lasoo gabangabeynayaa, waxaana ka qeybgalaya Qorayaal iyo Abwaano Soomaaliyeed oo ka kala yimid dunida dacaladeeda. Dhalinyarada iyo Haweenka Cadaado ayaa si aad ah isu xilqaamay marti galinta Bandhigan, Sidoo kale Wasiiru dowlaha Howlaha Guud DFS Axmed Qoorqoor oo maalgaliyey Carwadan Buugaagta Cadaado.
Waxan bogaadinayaa dadaalka intii soo abaabushay Bandhigga Buugaagta #Cadaado. Horumarinta dhaqanka iyo suugaanteenna waxay qayb weyn ka yihiin sare u qaadidda garaadka bulshadeenna. Bandhigyada bugaagta ee guud ahaan dalka waxay astaan u yihiin dib u soo kabashada dalkeena. pic.twitter.com/nDlbXtqPEY
Howgalka Xasilinta oo Gaaray Balad-wayne
1 thought on “Madaxweyne Farmaajo oo bogaadiyey Bandhigga Buugaagta Cadaado”
Masha allh hor Mar wacan